I-Alarm Clock Ultra, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu futhi oluphelele kakhulu lwe-alamu ye-Android | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Android, Aplicaciones, Software
Muva nje, siphathwe ngenqwaba yezinhlelo zokusebenza ezicebile ngokusebenza kwe-alamu Android, njengephupho iHome, Ukubhabha i-alamu yezwi nakusasa. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngenani lezici nezinga lokwenza ngokwezifiso, akukho kulokhu okungenhla okusondela ngisho nakokungena okupholile, i-Alarm Clock Ultra.
Iwashi le-alamu le-Ultra Ihlanganiswe nezinto ezinhle, kufaka phakathi ama-alamu enziwa ngezifiso ngokuphelele, izingqikithi ezibamba amehlo, amawijethi wesikrini sasekhaya amaningi (amele isikhathi samanje nama-alamu kokusetha okuningana okulandelayo), isikhathi sokujabulela ukulala ngokushesha (i-PAN), indawo yokumisa isitophu nesikhathi, i-hourglass ukusebenza ukusiza umama wakho alungiselele iqanda eliphekwe kanzima lobulukhuni obukhethwayo, inketho yokuvala / ukumisa i-alamu ngokuxazulula izinkinga zezibalo, ukudlala imidlalo noma nje ukuthuthumela ucingo, nokunye okuningi. Imininingwane ezolandelwa ngemuva kwekhefu.
Uhlelo lokusebenza lwe-UI luphawu lwephakethe lonke. Ayigcini ngokunikela ngoswidi abaningi bamehlo, futhi iqukethe zonke izici ezinikezwa ngaphansi kwezinkinobho eziyisithupha (6) eziphelele. Ukuqala ohlangothini lwesobunxele (uthatha ukuthi uphethe idivayisi ekumaqondana nobude be-portrait), inkinobho yokuqala ivela lapho ungabheka khona usuku nesikhathi samanje, ukuguqula imodi yosuku / yasebusuku, bese ubheka isimo sebhethri yamanje nge inkomba yebhethri enhle.
Cindezela inkinobho yomnyango, futhi kukuyisa esikrinini esibalulekile se-alamu sohlelo lokusebenza, lapho ungaphatha khona ama-alamu akho ahlukahlukene. I-alamu ngayinye ingenziwa ngezifiso ngendlela engapheli. Isibonelo, unikezwa inketho yokucacisa isikhawu sokusnuza se-alamu. Ungasetha uhlelo lokusebenza ukuthi ludlale ithoni ye-alamu engahleliwe, ukhethe okukodwa kokusetha kwangaphambili komsindo kohlelo lokusebenza lwe-alamu noma uchaze ifayela elenziwe ngokwezifiso le-MP3 kusuka kumtapo wezincwadi wakho ngale njongo. Ezinye izinketho zifaka ukumaka kanye ne-alamu yokudlidliza evunyelwa yilowo nalowo. Kusuka esikrinini esifanayo, ungabheka inketho ngokunyuka kancane kwe-alamu, kanye nokucacisa ubude besikhathi obukhethwayo balokhu kuphakama, ukuvuka ngomsindo ozolile kunokukhala okucasulayo.
Bese kufika inketho yokuchaza ukuthinta okuhlukile ukucashisa / ukusnuza ama-alamu. Ngalo mqondo, ungakhetha ukunika nje idivayisi yakho ukunyakaza okuncane, uxazulule inkinga yezibalo noma udlale umdlalo wephazili ukufeza leyo njongo. Ngokombono wezilungiselelo zokusnuza, ungasetha ubude be-alamu yangokwezifiso, kanye nenombolo ephezulu yemicimbi yokusnuza engathathwa.
Kusukela ezinkingeni zezibalo, uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi uchaze inani eliphelele lezinkinga onazo ezethulwayo ukuze kuthuliswe i-alamu. Izinga lobunzima lalezi zinkinga lingasethwa libe lula, eliphakathi, noma elinzima. Okukhethwa kukho kokugcina esikrinini se-alamu kubaluleke kakhulu, futhi, njengoba kukuvumela ukuthi ulungiselele ukusebenza kwe-alamu ngenkathi usocingweni. Ngaphezu kwalokho, kunenketho yokushintshela ekudlaleni ama-alamu ngenkathi idivayisi ikwimodi yokuthula. Zonke izilungiselelo ezingenhla kufanele zanele ukukusiza ukumisa ama-alamu ngokufanele.
Ufuna ukuthatha isihlwathi ngokushesha ngaphandle kokumisa zonke izilungiselelo ze-alamu ezibanzi? Cindezela inkinobho yeZzzzz kusixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza, khetha okukodwa kokusetha isikhathi se-alamu ezine (15, 30, 60 noma 120 imizuzu) bese ucindezela inkinobho yokulala ngokushesha ukujabulela ukulala kancane. Inkinobho yesine kusixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza ikuvumela ukuthi uqalise isitophuwashi esakhelwe ngaphakathi noma isibali sikhathi, ngenkathi inkinobho yesihlanu isuka lapho ungacacisa khona isibali sikhathi kanye nezinye izilungiselelo ezahlukahlukene ukulungiselela amaqanda abilisiwe. Ngalo mqondo, ungakhetha usayizi oyifunayo weqanda, uhlobo lweqanda ongathanda ukuba nalo, futhi uma konke sekusethiwe, mane ucindezele inkinobho yokuqala isibali bese ulinda i-alamu ukuthi lizwakale.
Inkinobho yokugcina kusixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza ikuvumela ukuthi ucacise okuncamelayo kohlelo lokusebenza okuhlukile. Ungakhetha ingqikithi yangemuva yohlelo, usethe ukuzwela kokunyakaza ukuthulisa / ukumisa i-alamu, kusebenze imodi yeholide (ukwenza kungasebenzi wonke ama-alamu ngasikhathi sinye), bese ubona isaziso se-alamu esilandelayo endaweni yesaziso, phakathi kweminye imingcele.
Ingabe usuvele unomuzwa wokuthi unokuningi kakhulu nokusetshenziswa kwe-'washi le-alamu '? Yebo, okungenhla yizici ezitholakala ngohlobo lwamahhala olusekelwa yizikhangiso lwe- I-alamu enkulu. Kunokwehluka okukhokhelwayo okungamadola amathathu okutholakala esitolo Dlala i-GoogleFuthi, ayibulali nje kuphela izikhangiso, kodwa futhi iletha ithani lezici ezingeziwe, kufaka phakathi imininingwane eyakhelwe ngaphakathi yesimo sezulu futhi amawijethiUkubheka imithombo yezokuxhumana yakho ebusuku kuyondla lapho uvuka, isici se-Ultra Sleep System esikusiza ulale uvuke nemvelo ekhululekile nenomsindo, namathoni amaningi we-alamu anezele wengeze echibini olithandayo.
Imininingwane engaphezulu - (Umenzi Wosuku: Iwashi le-toaster-alarm le-iPhone ne-iPod Touch)
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-Alarm Clock Ultra, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu futhi oluphelele lwe-alamu lwe-Android
IllegalAlienReport.com: Isiza sokuthola nokubika okungekho emthethweni e-United States